တောက်ပသောစက်ပစ္စည်းကိုသင်တစ်ဦးကလစဉ်စာရင်းပေးသွင်းမှုမရှိရင်နယူးရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက် Watch ရန်ကခွင့်ပြုသည်?
ယခုရောင်းချမည့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Ultimate တီဗီနှင့်အတူ, ဒီအခမဲ့သင်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်နှင့်ရှိုးပွဲကြည့်ရှုဖို့အကြီးအဖြေရှင်းချက်ပါ!
ငါတို့ရှိသမျှသည်အလွန်အမင်း cable ကိုဥပဒေကြမ်းများနှင့်ကြေးပေးသွင်းန်ဆောင်မှုများရှိနိုင်ပါသည်ဘယ်လောက်စိတ်ပျက်စရာငါသိ၏။
သင်ကတက်ကထပ်ပြောသည် ... cable ကိုဝယ်လိုအားအပေါ် Netflix, ရုပ်ရှင်နှင့်အားကစားပေးဆောင်။
နှင့်သင်တန်း၏ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဟာ့ဒ်ဝဲရှိသေး၏။ သင့်ရဲ့လက်ခံ, AppleTV သို့မဟုတ် Firesticks, DVD ကို Player ကိုမကြာခဏစျေးကြီးစမတ်တီဗီ။
တစ်ဦးကအမေရိကန်အခြေစိုက် startup ကုမ္ပဏီလူတွေကိုမီဒီယာလောင်လမ်းကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ကြောင်းသစ်တစ်ခုတီထွင်ဆန်းသစ်ခြင်းနှင့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ gadget ကအတူတက်ရောက်လေပြီ။
ဒါဟာကိုခေါ်မယ့် Ultimate တီဗီ ။ ဒါဟာအလွယ်တကူမဆိုတီဗီနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်မယ့် State-Of-The-Art မူလစာမျက်နှာပြဇာတ်ရုံသေတ္တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပြီးသား installed အရာအားလုံးနှင့်အတူကြွလာခြင်းနှင့်ဖွင့်ခြင်းနှင့်အပြေးမိနစ်အတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်မှမရှိပါနည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုဘယ်လောက်။
ဒါဟာသင်တို့ရှိသမျှသည်သင့်အခြား Hardware နဲ့ဝေးလံခေါင်သီဖယ်ရှားပစ်ရခွင့်ပြုတဲ့ All-In-One ဖျော်ဖြေရေးစင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်တူပြီးသား Pre-installed ဖြစ်ကြောင်းသိကြအားလုံးသည် apps များ AppleTV, အမေဇုံ Firestick စသည်တို့ကိုတူသောထုတ်ကုန်ကနေကိုသိစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အဓိကကွာခြားချက်ရှိပါတယ် - သင်အခမဲ့ဘာမှစောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ subscriptions ကိုများနှင့်လုံးဝတရားဥပဒေဆိုင်ရာအဘယ်သူမျှမနှင့်အတူ။
cable ကိုအစားထိုးဖို့အကောင်းဆုံး streaming များ device ကို
ဒါဟာလွယ်ကူ! ရုံသင်ရှိသည်ဆိုတီဗီနှင့်အတူ Ultimate တီဗီချိတ်ဆက်ပါ။ အားလုံးကြိုးတွေအထုပ်ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါသည်။ ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါနှင့်ပြုမိ။ အဘယ်သူမျှမအလေးအနက်ထား, ကစာသား 10 စက္ကန့်ကြာခြင်းနှင့်သင်ချင်တယ်ဘာမှစောင့်ကြည့်နိုင်ကြသည်။
အဆုံးစွန်တီဗီလုံးဝ reprogrammed ကပင်ပိုမိုလွယ်ကူအလုပ်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဇိုင်းသိရသည်။ အဆိုပါ Ultimate တီဗီနည်းပညာကြောင့်နေရာချထားခြင်းနှင့်စည်းဝေးကြလိမ့်မည်ရှိရာအင်တာနက်, လုံးဝနီးပါးမဆိုရုပ်မြင်သံကြားပြပွဲ, hollywood ရုပ်ရှင်ကား, သို့မဟုတ်သင်ငှားရမ်းအခကြေးငွေသို့မဟုတ်လစဉ် subscriptions ကိုပေးဆောင်စိုးရိမ်ရန်မလိုဘဲကြည့်ရှုချင်တိုက်ရိုက်အားကစားဖြစ်ရပ်ရှာတတ်၏။
သငျသညျတိုက်ရိုက်ရုပ်သံလွှင့်သို့ပင်ညှိ 24/7 သင်သည်သင်၏ဒေသခံကေဘယ်လ်ကုမ္ပဏီနှင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှရာပေါင်းများစွာကိုပိုမိုထံမှရလုနီးပါးအပေါငျးတို့သလိုင်းများအပါအဝင်နိုင်ပါတယ်။ သင်တန်း၏အရာအားလုံးက Ultra HD ။
အဘယ်အရာကိုစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ကောင်းသောမှဖြစ်အသံအဘယ်သူမျှမညှို့ပူးတွဲ, အဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါသည်။ ၏သင်တန်းကိုသင်အင်တာနက်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နှင့်အနည်းငယ်နှစ်ကောင်တစ်လဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့မူကား, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိသည်မဟုတ်လော ထိုအတင်များနှင့်ကြားခံကြိမ်ကိုရည်မှတ်။ အဆုံးစွန်တီဗီကိုအလိုအလျောက်ဒါအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးရှိသမျှမျိုးကိုချက်ချင်းကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်သင်၏အင်တာနက်မြန်နှုန်းဖို့ညှိ။ Youtube ကိုအလုပ်လုပ်တယ် အကယ်. Ultimate တီဗီလည်းအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
Ultimate တီဗီနှင့်အတူသင့်အကြိုက်ဆုံးပြပွဲကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် သိ. စိတ်၏ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်သည်! အတိအကျ။ ဒါဟာသင်ရုံ streaming အကြောင်းအရာချွေတာမဟုတ်အဖြစ်သုံးစွဲဖို့လုံးဝဥပဒေရေးရာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကြီးစွာသောအရာဖြစ်၏။
သူတို့ကအများပြည်သူကရောင်းချရာမှ Ultimate တီဗီကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ဒါ၏သင်တန်း cable ကိုကုမ္ပဏီများအခွအေနကေိုပျော်ရွှင်နေကြသည်မဟုတ်။ လုံးဝဥပဒေရေးရာ - ဒါကြောင့်မကြာမီသင်လုံးဝဒဏ်ငွေဖြစ်ကြပြီးအစဉ်အမြဲအခမဲ့အရာအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါလိမ့်မည်တဦးတည်းရှိသည်အဖြစ်မကြာမီနောက်ကျော-အမိန့်ထုတ်ပေမယ့်ရပေလိမ့်မည်။
ဘယ်လောက်ငါ့ကိုကုန်ကျ Going သလဲ?
သငျသညျဖြစ်ကောင်းဒီကိရိယာကိုအတုအယောငျ ... အလွန်စျေးကြီးကြောင်းစဉ်းစားနေတဲ့! အဆုံးစွန်တီဗီတစ်ခုဝယ် 1 get 1 အခမဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကို running နေပါသည်! တစ်ကြိမ်ငွေပေးချေမှု - မပါကြေးပေးသွင်းမရှိလစဉ်ကုန်ကျစရိတ်များ။ စုံစမ်းသည်!
သငျသညျနိုင်ပါတယ် ဒီနေရာမှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကုမ္ပဏီရဲ့ website ကနေတိုက်ရိုက်ဝယ် ။
မှတ်ချက်: ကအလွန်မြင့်မားဝယ်လိုအားရဲ့အမျှသူတို့နောက်ပိုင်းပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းမှာသူတို့ကိုပြန်လည်ရောင်းချရန်ချင်အဖြစ်လူတွေကယခုတစ်ကြိမ်မှာမျိုးစုံပစ္စည်းတွေဝယ်ယူနေကြသည်။ ရေကြောင်းများအတွက် 1-2 ပတ်ကြာခွင့်ပြုပေးပါ။
အခမဲ့ဘာမှစောင့်ကြည့်ဖို့ Start ...
အခုဆိုရင်သင်ဤတောက်ပတီထွင်မှုနှင့် ပတ်သက်. အသိပေးခဲ့တာကြောင့်, ငါ့ကိုက set up လုပ်ဖို့ဘယ်လောက်လွယ်ကူသောသင်ပြကြကုန်အံ့။ သင်ပြုရန်လိုအပ်သမျှသောဤ3ခြေလှမ်းများနောက်သို့လိုက်ရန်ဖြစ်ပါသည်:
အဆင့် 1: အမိန့် Ultimate တီဗီ ယနေ့ 40% OFF ရောင်းချမှု၏အားသာချက်ယူ။
အဆင့် 2: သင်ကခံယူသောအခါ, အထုပ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းကေဘယ်လ်ကြိုးအားဖြင့်သင်တို့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတီဗီကချိတ်ဆက်နဲ့ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ အဆုံးစွန်တီဗီသင့်ရဲ့ Wi-Fi သော့ချက်အကြောင်းကိုမေးတယ်။ ၌ထညျ့သငျသှားဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
အဆင့် 3: အခမဲ့ဘာမှ Watch ... Ultimate တီဗီအလိုအလျောက် Blockbuster သို့မဟုတ်ပေါ်ပြူလာပြပွဲပြသပါလိမ့်မယ်, သင်အမြဲဘာမှကိုရှာခြင်းနှင့်ချက်ချင်းကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးအစွန်အဖျားင်: အဲဒါကိုလက်ခံသောသူလူတိုင်း, ပိုက်ဆံ၏တစ်တန်ကယ်တင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် Ultimate တီဗီတို့သည်ကြီးစွာသောလက်ဆောင်တစ်ခုပါ!
သူတို့နောက်ကျော-အမိန့်ထုတ်ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လူတွေအများကြီးတပြိုင်နက်မျိုးစုံပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့အဖြစ်! ဒါကြောင့်သင်္ဘောများအတွက် 1-2 ပတ်ကြာခွင့်ပြုပါ။ "